चीन जाने बाटो
‘नेवाः राज्य सभ्यताको हाराकिरी’मा एउटा यस्तो वाक्य परेको थियो, लसुनको विशद बयान एउटै पुस्तकमा थियो र त्यो पुस्तकको एउटामात्र पृथ्वीमा जीवितप्रति नेवारहरूसँग थियो, काश्यप संहिता। जसले मह काढ्यो, उसले हात चाट्यो।
लिम्बूहरूले लसुन चीनबाट आएको मानेका छन्, विज्ञानले त मानेकै छ। चीनको लसुनसँग नेवारहरूको गहिरो सम्बन्ध छ।
अदुवा त्यस्तै सम्बन्ध रहेको अर्को खाद्य पदार्थ हो। लिम्बूहरूले अदुवालाई पनि चीनबाट आएको मानेका छन् (उनीहरूका देवता थुङ्थाङ्वा त्यसमा विराजमान भएर आए), विज्ञानले मानेको त छँदै छ। अदुवाको सम्भवतः हाम्रो प्राचीन उल्लेख अन्दाजी सन् ९४३ को बाजपरीक्षा (पोखरेल) को हो।
तोरी नेवार, तामाङहरूमा मात्र नभएर ब्राह्मण, क्षत्रीहरूबीच पनि अत्यन्त प्रिय र कहिलेकाहीँ अनिवार्य साग हो। पवित्र मानिने भएकाले पनि नेवार र अरूहरूका पूजामा समेत प्रयोग हुन्छ। हजारौँहजार वर्षदेखि खाइँदै छ होला।
यद्यपि सम्भवतः पुरानो उल्लेख सन् १६७३ को हो। चीन नै यसको मूल मानिएको छ।
सस्र्यूँ खान, कथित भूतप्रेत पन्छाउन आदि–आदि अनेक कुरामा प्रयोग हुन्छ। चीनकै मानिएको छ। सम्भवतः पुरानो उल्लेख सन् १३०० को हो।
रायोको त नामै चाइनिज मस्टार्ड। यद्यपि चिनियाँ पे–त्साई केही फरक हुन्छ, यसबाट। नेवारी नाम पाछै भने पे–त्साईबाटै बनेको हो। आज सबै कुरा बिर्सिसकिएको छ तर पाछैको मात्रै खेती विशेष गर्ने महर्जनहरूको भित्री थर नै पाछै हुन्थ्यो, कुनै बेला।
भटमासको उत्पत्ति थलो मन्चुरिया। चीनकै भाग हो, मन्चुरिया। सेतो, खैरो र कालो रङको रङअनुसारको विशेष प्रयोग र प्रयोजन नेवार समाजमा विस्तृत छ। अति प्राचीन समयदेखिको प्रयोग नभई त्यस्ता मिहीन मान्यताहरू स्थापित हुँदैनन्। माथिका ६ वटा उदाहरणपछि दुइटा विचित्रताको अब उल्लेख गर्नुछः
जब मकै आयो, जगज्योति मल्लका बेला, त्यसको लगत्तैजस्तो मकैका बीच–बीचमा भटमास रोपिदिने तरिका अपनाए, नेवारहरूले। कोसे बिरुवाले बिरुवालाई अत्यावश्यक नाइट्रोजन उत्पादन प्रक्रियामा सघाउँछ, त विज्ञानले धेरैपछि भन्यो बरु।
जब लसुन हात प¥यो तिनको, तिनले जुन बिरुवामा लाही (एफिड स्पेसिज) त्यसको छेउमा लसुन लगाइदिने तरिका अपनाए। लसुन जैविक किटनाशक हो भनेर त विज्ञानले धेरैपछि भन्यो बरु।
अनि तोरीको तेलमा लसुन र भटमास साँध्ने एउटा संयोजनको यसरी विकास गरे तिनले, अहिले त्यो नै उनीहरूको खाद्य परम्पराको विशेष परिचय बनेको छ।
तोरीको तेल शिरमा, सस्र्यूँको तेल शरीरमा लगाउनुपर्छ भन्ने मान्यताको स्थापक पनि तिनै भएका छन्। प्राप्त वस्तुको अधिकतम् प्रयोग, अधिकतम् ज्ञानको उपलब्धता एउटा चरित्र बनेको छ। साधनको स्रोत भने चीन नै हो।
मूला, खाना खाइसकेपछिको सिसाबुसा (सलाद÷फलफूल) का रूपमा नेवारहरू प्रयोग गर्छन्। यसले पाचनशक्तिलाई बलियो बनाउँछ भन्ने उनीहरूको विश्वास छ। मूलाको बीउको एउटा विशेष पाचक नै प्रचलित छ, उनीहरूबीच। चीनकै मानिन्छ, मूला पनि।
नेवारहरूले प्रयोग गर्ने मूला भने प्रायः रातो रङको हुन्छ। उपत्यकामा कुनै बेला लगाइने एकमात्र जातिको मूला रातै हुन्थ्यो भनिदिँदा हुन्छ। ब्राह्मणहरूले भने प्युठाने भनिने सेतोमात्र खान्थे, रातो मूला खानु र गाई खानु बराबर ठानिने भएकाले। गाजर यसै भएर उनीहरूबीच उति लोकप्रिय नभएको हो।
नेवारहरूमा रातो मूला कतिसम्म प्रियः रह्यो भने जयस्थिति मल्लले बाँडा (शाक्य, तुलाधर) आदिलाई मूला र अदुवा खेती गर्नुपर्ने जिम्मेवारी सुम्पिए। सम्भवतः नेपाली मूलाको सर्वप्राचीन उल्लेख ११ औँ शताब्दीको ‘राजनिघण्टु’को हो। काँव्रmो सिसाबुसामा पर्ने अर्को अनिवार्य फलफूल हो। चीनकै मानिएको यसको सम्भवतः प्राचीन उल्लेख सन् १३८१ को जसदास वैद्य लिखित ‘पुत्रपौत्रादीबोधिनी’को हो।
खर्बुजा थर नै हुन्छ, भक्तपुरमा। यसैबाट थाहा हुन्छ, कति लोकप्रिय थियो होला यो ? संस्कृतमा यसको नाम नै चिनियाँ कर्कटी, विज्ञानमा सिट्रलस भल्गारिस भए पनि। सन् १६०४ मा भक्तपुरमा देखिएको उल्लेख पाइए पनि मध्य–एसियाबाट चीन हुँदै नेपाल आइपुगेको हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। मध्य–एसियामा पर्ने सिन्कियाङ प्रान्त चीनकै हो।
आरु खास मङ्गोलियाको हो। हिजोको मङ्गोलिया चीनभित्रै थियो, रुस र जापानले चीनबाट टुœयाइदिनुअघि, अमेरिकाले कोलम्बियाबाट पनामा टुœयाइदिएजस्तै। सम्भवतः १५ औँ शताब्दीभन्दा धेरै–धेरै नै अघि आइसकेको थियो, आरुको बियाँको गुदी घ्यूमा भुटेर गणेशलाई नचढाई पूजा नै सम्पन्न नहुने नेवार चलनबाटै थाहा हुन्छ यो।
भोगटेलाई कसैले मलेसियायी मूलको र कसैले पोलेनेसियन मूलको माने पनि नेपालमा भने चीनबाट आएको परम्परागत धारणा छ। भोट शब्दबाटै बिग्रेर भोगटे हुनपुगेको मान्यता छ। नेवारहरूको म्ह (आत्म) पूजामा भोगटे नभई हुँदैन, तराईको सलहेश गाथाको प्रसङ्गबाट सातौँ शताब्दीभन्दा अघि नै भोगटे आइसकेको थियो भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ।
लप्सी, भोजभतेर भइसकेपछि पाचक पदार्थका रूपमा दिइने अमिलो झोल (पाउँ) को स्रोत हो। लप्सीको इलाका नेपालदेखि सिक्किम दक्षिण चीनको युनान हुँदै जापानसम्म पर्छ तर वनस्पतिविज्ञहरू स्वतः उम्रिएको नपाइने, रोपेको मात्र पाइने भएकाले आयातित नै ठान्छन्। लप्सीका बियाँ घुमाएर खेलिने नेवारहरूको अहिले लोप भइसकेको खेल, च्याम्पटी (अमेरिकी ब्याब्लेटजस्तै) बाट पनि थाहा हुन्छ, त्योसँग उनीहरूको परिचय पुरानो हो।
भिलायस्वाँ नेवारीमा भृङ्गराज हो तर यो संस्कृतज्ञहरूले प्रयोग गर्ने वा भन्ने अनेकौँ कुनै भृङ्गराज होइन। यो चिनियाँ मूलको पहेँलो वेड्डेलिया क्यालुन्डेलासिया हो।
ज्ञान्तका नेवारीमा अरू कुनै ज्ञानी थकुँ पुष्प होइनन्। बरु चिनियाँ मूलको क्यालिस्टेफस चाइनेन्सिस हो। सम्भवतः पुरानो उल्लेख सन् १५७५ को हो।
चिकंढाल स्वाँ भन्दाखेरी चाँगे (सेलोसिया अर्जेन्टिया) हुनुपर्ने हो, हाम्रा निम्ति तर पुराना नेवारहरूका निम्ति यो हेमेरोक्यालिस फल्भा हो चिनियाँ मूलको, जो कुखुरा बली दिने बेला नभइहुँदैन।
चियाका कुरा नगरौँ, भक्तपुरमा फोसी भनिने हिबिस्कस म्युटाबिलिसका कुरा नगरौँ, डबल जाई भनिने ज्यास्मिनम मेस्निका कुरा नगरौँ, अनगिन्ती छन्। निक्र्यौल के मात्रै भने उनीहरूका प्राचीनतम् मसला चीनकै छ। आदिकालिन आयातित फलफूल चीनकै छन् र आयातित आलङ्कारिक चीनकै छन्, जो अब अनिवार्य जस्तै भए।
उतातिर भने भारतीय मूलको भन्नुपर्ने तीनवटा कुरा मात्र छन् ः मास, गहत र चना। यसमध्ये मासमात्र अति पुरानो हो। यसर्थ जनजीवन, कृषि उत्पादन, जीविकाको प्राचीन झुकाव उत्तरतिरै छ, उपत्यकावासीको मात्र होइन, अन्यत्रको पनि।
वनमालाहरू चीनबाट आएका हुनाले सुँगुर खान्छन्, हामी नआएकाले खाँदैनौँ– एक मालाकारले भने, यसैले हामी एउटै होइनौँ। हाम्रो बीच विवाह हुँदैन।
वनमालाहरू भक्तपुर नवदुर्गा मन्दिरवरिपरि र ताथलीमा बस्छन्। मालाकारहरू यत्रतत्र छन्। वनमालाहरू जङ्गलका फूल बटुलेर बेच्ने र मालाकारहरू फूल खेती गरेर अन्नसँग साट्ने फरक प्रकृतिका हुन्। मालाकारहरू खासगरी भारतको बङ्गालमा प्रशस्त र धेरै नै स्थापित छन् पनि। बँदेल खान हुने तर सुँगुर खान नहुने मान्यता स्थापना गरेको आपस्तम्ब धर्मसूत्र र गौतम स्मृतिले हो। दुवै भारतीयहरूले लेखेका हुन्।
खर्पनमा बोकेर खेतमा मानव मल हालिन्छ, चीनमा। चीनमा मात्र होइन, चीनबाट जापानमा पनि पुगेको छ यो।
२०३० सालसम्म पनि, जब चव्रmपथ बनेको तीन वर्षमात्र भएर घरहरूले भरिँदै जान थाल्यो, मानव मल खेत, बारीमा हालेको प्रशस्तै देख्न सकिन्थ्यो, काठमाडौँ उपत्यकामा। त्यति बेला एक ढ्वाङको मात्र ७५ पैसा तिर्नुपथ्र्यो, एक किसानले। दुई ढ्वाङ हाल्न लगाउँदा देउलालाई साढे एक रुपैयाँ मात्र।
उमेर बढी भएकीलाई पत्नी बनाउँथ्यो, कृषक पुत्रले। त्यस्तो व्यवस्था गरिदिन्थे, चीनमा बाबुआमाले। ज्याला दिनुनपर्ने कृषि मजदुरको व्यवस्था थियो त्यो, त्यहाँको १९४९ को व्रmान्ति हुनुअघि। माओ त्से तुङकी पहिलो पत्नी पनि उनीभन्दा धेरै जेठी भएकीले उनले छोडेका थिए।
काठमाडौँ उपत्यकामा पनि त्यही देखिन्थ्यो। अझ काँठका ब्राह्मण क्षत्रीहरूमा समेत यो चलन थियो। मुखले नभने पनि जेठी कमाउनका निम्ति, कान्छी सन्तान जन्माउनका निम्ति थियो, व्यवहारमा।
लिपिको रूपमा चित्र बनाउने अभ्यास गरेकाले जापानी पनि प्रकृतिको मात्र होइन, ठूलठूला इन्जिन देख्नासाथ नक्कल गर्न सक्दछन्, एक नेपालीले लेखे (पेज ९८, बर्मा)। चिनियाँ लिपि पनि त्यस्तै चित्र लिपि नै हो, यही पछि जापानी र कोरियायी लिपिमा रूपान्तरण हुँदै गएको हो। नेवारहरूमा पनि ठ्याक्कै त्यस्तै देखिन्छ, जब ती रञ्जना, भूँजिमोल आदि चित्रात्मक देवनागरी लिपिमा थिए, तिनका परिकल्पना ठूलठूला मन्दिर, बाटो, पुल, गुठी परिसर, खेती फाँटमा रूपान्तरण भएको देखिन्छ र सरलीकृत देवनागिरीमा लागेपछि स्थुल वस्तुमाथिको न्यून कल्पनाशीलता।
त्यसो भए सम्भोटा लिपि प्रयोग गर्ने तामाङहरू र श्रीजङ्गा लिपि प्रयोग गर्ने लिम्बूहरूमा मौलिक कल्पनाशीलता किन चर्को नभएको भन्ने प्रश्न आउन सक्छ। कल्पनाशीलता पनि अभ्यास हो, त्यसका निम्ति लिपि आजको जस्तो आम पहुँचमा थियो र ?
जस्तो बाक्लो र जे तत्वको बन्छ, त्यसलाई कोरियामा भन्छन्, बाकली। र यहाँ त्यसको ठेट अनुवाद हुन्छ, जाँड। कोरियामा धेरै कुरा चीनबाटै विस्तार भएका छन्। चामललाई भनिने नेवारी शब्द जाकीबाट जाँड बन्न पुगेको त हो तर बाकलीकै रूपान्तरण पनि त्यसै भएन होला। अन्यथा अरू पदार्थबाट बन्ने आइराक वा जापानी साकी त्यति बाक्ला हुँदैनन्। कोदो चुहाएर बनाइने पूर्वी पहाडको सरुवा त झनै हुँदैन नै।
काँस बन्छ, तामा र जस्ता मिसाएपछि। यसैबाट बन्दछ, धातुको ऐना, धेरै वर्षसम्म घोटेर बनाइने ऐना प्राचीन युगको। यही ऐना लिएर जानुपर्दछ, जापानी सम्राट राज्याभिषेक भएपछि सूर्य मन्दिरमा भनेर अघिल्लै एक लेखमा लेखिसकियो।
कालोङ भन्छन्, यो ऐनालाई तिब्बतमा। यही ऐना आज नेवार निर्मित मन्दिरहरूमा उभिएको छ, ज्वाला न्हायँक (सूर्य ऐना) भएर भनेर पनि लेखिसकियो। विवाहमा पनि चाहिन्छ यो, ले सोझै भन्छ जापानी सम्राटको जस्तै पर्वको अनिवार्य तत्व हो यो।
भुटीमाली भन्छन् नेवारहरू चङ्गालाई, भोटको बाटो हुँदै नेपाल आएकाले। मालीको अर्थ पङ्तिकारलाई अहिले यकिन भएन। चङ्गा शब्द हिन्दी हो, अर्थ हो, हल्का। लट्टाई शब्द पनि हिन्दीकै लट्टुबाट बनेको हो, अर्थ हो घुम्नु।
भुटीमाली यसैले अत्यन्त सटिक नेपाली भनिदिए हुन्छ नेवारी भन्नुका सट्टा। चीनमा उनीहरूको पात्रोको नवौँ महिनाको नवौँ दिन भुटीमाली उडाउँछन् चिहानस्थलमा, सन्देश पु¥याइदेओस् त्यसले स्वर्गमा बसेको पूर्वजलाई भनेर। यसैले हामीले पनि नवौँ शताब्दीमा बुढानीलकण्ठ बनेपछि त्यहीँबाट खास दिन अर्थात् कार्तिक कृष्ण द्वादशीको दिन चङ्गा उडाउन थाल्यौँ, बुढानीलकण्ठ लोक अर्थात् विष्णुलोकमा रहेका पूर्वजलाई सन्देश पु¥याइदओस्, भुटीमालीले भनेर।
तर कालान्तरमा उडाउनुको अर्थ अनर्थमा बदलियो, दशैँपूर्व पाकिसकेका धान थप पानी पारेर नबिगारिदेऊ भनी इन्द्रलाई सन्देश पु¥याउने तरिका भन्दै (हेरेहुन्छ, मेजोकोज्म – रबर्ट लेभी)।
औल, बाघ, हात्ती, सर्प, बिच्छीजस्ता भयानक बनैया जीवजन्तु; धाप, गर्मी, खानबस्न नपाइने विस्तृत आदि पाँच कारणले कम्तीमा इसाको पहिलो शताब्दीसम्म उपत्यका चीनतर्फ जुन निरन्तर लाग्यो, त्यो प्रा–चीन, अर्वा–चीन,
महा–चीन युग थियो र हो। जसको यावत् छाप आज पनि नेवारहरूमा टड्कारो छ।
(सौरभ लिखित तेस्रो पुस्तक ‘असङ्गती’ अर्को हप्ता सार्वजनिक हुँदैछ। प्रस्तुत सामग्री सोही पुस्तकबाट लिइएको हो।)
प्रकाशित मिति: शनिबार, असार ३, २०७४ १२:०५:२४
आगजनी आक्रमणमा परेर काेरियामा पाँचको मृत्यु
प्रचारप्रसार एवं संरक्षणको अभावले सीता गुफा ओझेलमा
परीक्षा पास भएका डेढ लाख सेवाग्राहीले पाएनन् ‘स्मार्ट लाइसेन्स’
फर्पिङमा सुमोको ठक्करबाट स्कुटर चालककाे मृत्यु
चिसोपीडित परिवारलाई कम्बल वितरण
अर्घाखाँचीकाे छत्रदेवमा कृषिवन शिक्षालय सञ्चालनमा